တရုတ်နိုင်ငံထုတ် အဏ္ဏဝါမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ် စမ်းသပ်မှု အလုံးစုံပြီးမြောက် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ် (The Wing Loong-10) သည် အဏ္ဏဝါမိုးလေဝသ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဆိုင်ရာ သိပ္ပံသုတေသန နှင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု ခရီးစဉ်တစ်ခုကို အလုံးစုံအောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းမောင်းသူမဲ့ယာဉ်(UAV) ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီက စနေနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် (စနေနေ့နံနက်ပိုင်း)တွင် မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ် Wing Loong-10 သည် သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပေါ်တွင် cloud စနစ်များဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းများ ၊ အပူချိန် နှင့် ရေငွေ့ပျံမှု ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်လေတိုက်နှုန်း နှင့် အခြားသော မိုးလေဝသဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို တိုင်းတာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းလေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် လေကြောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်း (AVIC) က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် မိုးလေဝသလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ် (Wing Loong-10 UAV) အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာပင် The Wing Loong-10 မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ်၏ စနစ်အားလုံးသည် ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နေခြင်းနှင့်အတူ ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင် ရှိခဲ့ကြောင်း AVIC က ဆိုသည်။
The Wing Loong-10 သည် အမြင့်ပေမြင့်မားစွာ နှင့် မြန်နှုန်းမြင့်မားစွာဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ်စနစ်များကို တပ်ဆင်ထားသော ခေတ်မီ ဒရုန်းမော်ဒယ်အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းမောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ်(UAV) သည် မြန်နှုန်းမြင့်မားစွာမောင်းနှင်နိုင်ခြင်း ၊ အမြင့်ပေမြင့်မားစွာပျံသန်းနိုင်ခြင်း ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စနစ်များတပ်ဆင်ထားခြင်း ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်း လုံခြုံစွာပျံသန်းနိုင်ခြင်း နှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖြင့် ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဝယ်ယူအားပေးသူများထံမှ မတူကွဲပြားသော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, Nov. 27 (Xinhua) — The China-developed Wing Loong-10 unmanned aerial vehicle (UAV) has completedascientific research and experiment test mission on marine meteorological observation, announced the developer on Saturday.
On Saturday morning, the Wing Loong-10 UAV carried out collaborative observations on cloud systems over the ocean, temperature and humidity profile distribution, surface wind fields, and other meteorological factors, said the Aviation Industry Corporation of China, Ltd. (AVIC), the country’s leading aircraft maker.
The Wing Loong-10 isamodel of high-altitude and high-speed UAV systems. It features high-speed, high-altitude, reliable systems, safe performance, and convenient and efficient deployment, enabling the UAV to meet diverse demands from customers. Enditem